फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - महँगो उपहार
महँगो उपहार विमल निभा
आज मेरो जन्मदिन हो । बिहानैदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको छु । कोही एकजना पनि जन्मदिनको बधाई दिन आएनन् । अर्थात् मलाई शुभकामना दिन ।
के मेरो एकजना पनि शुभचिन्तक रहेनछ त ? होइन, दिउँसोतिर एक परिचित आइपुगे । यिनलाई म काका भन्ने गर्छु । सम्पूर्ण टोल नै प्रेमपूर्वक काका भन्ने गर्छ । याने बदमास काका ।
किनभने बराबर जेल भ्रमण गरिरहन्छन् । केही दिनअघि नै जेलबाट छुटेका हुन् । सुनकाण्डमा समातिएका थिए । यस प्रकारका काण्डका अनुभवी हुन् र अर्धशताब्दी नाघिसकेका वृद्ध ।
जे होस्, मेरो जन्मदिनको घोर निराशाको बेलामा एकजना भए पनि बधाई प्रदान गर्न त आइपुगे । म सन्तुष्ट भएँ । एकजनाको बधाई भए पनि मेरा लागि पर्याप्त नै छ ।
बढी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद आदि ग्रहण गर्ने मेरो हैसियत पनि छैन । यस्तो कुरा पचाउन मलाई गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा मेरो पाचनशक्ति असाध्यै कमजोर टाइपको छ ।
मेरो जन्मदिनको बधाई दिन आउनुभएको हो काका ? उनीसँग झटपट बधाई लिने हतारमा मैले भनँे, कसरी थाहा पाउनुभयो ?
के भनेको तिमीले बाबु ? उनी अलमलिएका थिए ।
आज मेरो जन्मदिन हो । मैले मलिन स्वरमा भनेँ, के तपाई मलाई जन्मदिनको बधाई दिन आउनुभएको होइन ?
होइन बाबु, म त अर्कै कामले तिमीकहाँ आएको हुँ ।
के काम काका ?
मलाई मन्त्रीज्यूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हुने रात्रिभोजको निमन्त्रणा आएको छ । बदमास काकाले प्रफुल्लताको आवाजमा भने, म उनलाई के उपहार दिउँ ?
मलाई के थाहा ? मेरो बोलीमा थोरै रोष थियो ।
तिमी हाम्रो टोलको एक जान्ने—बुझ्ने बुद्धिजीवी भएकोले सरसल्लाह लिन आएको हुँ बाबु ।
एकाएक मेरो मुड बिग्रियो । पर्याप्त मात्रामा । एक प्रकारले म आहत पनि भएँ । आफ्नो जन्मदिनमा कुनै अर्कैले बधाई पाउनु मेरा लागि सुखद हुने कुरा पनि भएन । म चुप लागेँ ।
क्या वाहियात संयोग ! एउटा लेखक र सरकारी मन्त्रीको जन्मदिन एकैदिन परेछ । (सालचाहिँ पक्कै फरक होला) । मेरो जन्मदिन व्यर्थै जाने भयो । यस्तोमा बधाई र शुभकामनाको के आशा गर्नु ? म निराश भएँ । मन्त्रीज्यूकहाँ जन्मदिनको बधाई दिनेहरूका ताँती लागेको हुनुपर्छ ।
अर्थात् बेइमान ठेकेदार, भ्रष्ट हाकिमहरू, पाखण्डी नेता, दुईनम्बरी व्यापारीहरू, नामुद तस्कर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनखोरहरू त्यहाँ मन्त्री क्वाटरको गेटमा क्युमा उभिएका होलान् ।
मकहाँ भने एकजना मात्र आए । त्यो पनि नक्कली बधाई दिने । असलमा बधाई दिन नै होइन । बदमास काका त मन्त्रीज्यूको जन्मदिनमा के उपहार दिने भनी मसँग सोध्न पो आएका हुन् ।
के उपहार दिनु बेस होला ? बदमास काकाले जोड दिएर भने, निकै नै वरिष्ठ खाले मन्त्री भएकाले उपहार कुनै चानचुने किसिमको हुनुभएन बाबु ।
आफ्नो जन्मदिनको दुर्दशा भएकोले मलाई रिस उठिरहेको थियो । तैपनि सामान्य शिष्टाचारको पालन गर्नैपर्यो । त्यसैले मैले विस्तारै सोधेँ, कस्तो खाले उपहार काका ?
अब कस्तो खाले उपहार भन्ने नि ! काकाले भने, मन्त्री जस्तालाई सस्तो खाले उपहार दिनुभएन । स्तरको ख्याल गर्नुपर्यो । त्यसैले महँगो खाले उपहार दिनुपर्यो । यति त गर्नैपर्यो नि !
त्यसो भए तपाई मन्त्रीज्यूलाई महँगी नै जन्मदिनको उपहारमा दिनोस् । मैले आफ्नो बधाइहीन जन्मदिनको झोंँकमा जवाफ दिएँ ।
यो ठट्टा भयो बाबु । उनले गम्भीर भएर भने, तिमीले म बूढोसँग यसरी ठट्टा गर्न मिल्छ ?
यो विलकुलै ठट्टा होइन काका । अब तपाई नै भन्नोस्, अहिले महँगीभन्दा महँगो यो देशमा अरु के छ ? मैले पनि गम्भीरताका साथ भनेँ, महँगी नै सबभन्दा महँगो उपहार हो । त्यसैले तपाई मन्त्रीज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा महँगी नै उपहार दिनोस् । महँगीभन्दा महँगो उपहार अरु केही हुनसक्दैन ।
ठट्टा होइन भने ठिकै छ । काकाले प्रश्न गरे, तर महँगी कसरी उपहारमा दिने बाबु ?
यसलाई चलनचल्ती हिसाबले नै दिनोस् । मैले भनेँ, महँगीलाई राम्रो चिल्लो र बलियो विदेशी कागजमा बेर्नाेस् । यसरी चिटिक्क परेको महंँगीलाई मन्त्रीज्यूको हातमा दिएर भन्नोस्– ह्यापी बर्थडे टु यु...।
महँगी उपहारमा लिनुहोला त मन्त्रीज्यूले ? मैले फेरि ठट्टा गरिरहेको त छैन भन्ने आशंकाले बदमास काकाले मेरो आँखामा हेरे ।
किन लिनुहुन्न ? मैले भनेँ, महँगीको आफ्नै खाले उपयोग छ । ठूला बडाहरू दामी चिजबिजहरूलाई बैठक कोठामा सजाएर राख्ने गर्छन् । महँगी पनि यही कोटीमा आउँछ । अझ महँगी त सबभन्दा महंगो उपहार भयो । यसले मन्त्रीज्यूको बैठक कोठाको शोभा नै अर्काे हुनेछ । एकदमै शानदार । मन्त्रीज्यूलाई महँगी नै उपहार दिनोस् काका ।
आखिरमा मेरो तर्कले बदमास काका सन्तुष्ट भए । उनलाई मेरो महँगी उपहारमा दिने आइडिया निकै उपयुक्त लाग्यो । त्यसैले उनी मन्त्रीज्यूलाई महँगी जन्मदिनको उपहारमा दिन हिँडे ।
म अहिलेसम्म बधाइहीन स्थितिमा छु । अबेर रात भइसक्यो । मेरो जन्मदिनको बधाई दिन कोही पनि आएका छैनन् । आआफ्नो हैसियतको कुरो हो । उता मन्त्रीज्यूलाई जन्मदिनको उपहार लिँंदैमा फुर्सद छैन र यता म यस्तो स्थितिमा छु । अर्थात बधाई शून्यतामा । जन्मदिन एकैदिनमा परेछ । के गर्ने ?
कान्तिपुर, वैशाख १८, २०७३